प्रियंका कार्की – Kavreonline Patra
भारतको सिक्किममा राष्ट्रिय भाषा नै नेपाली भाषा बनाउने घोषणा (सक्दो सेयर गर्नुहोला)
सक्दो सेयर गरिदिनुहोला देखेर पनि नदेखे जस्तो नगरिदिनुहोला #Rip
छोराको सर्टिफिकेट लिन गएका बुबाको अरिंगालले टोकेर मृ’त्यु
सौतेनी आमाको कुटपिट, फोटो छोएर सेयर गरीदिनु होला नानिको बुबासम्म यो फोटो पुगोस्!!
असोज ९ गते शनिबार, शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईंको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
असोज ८ गते शुक्रबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेन्रुहोस राशिफल
भगवान् शिवको दर्शन गरि फाेटो छोएर कमेन्ट मा OM लेख्नुहोस्
कतार बाट फर्केर सुरु गरेको ब्यबशाय कोरोनाले डुब्यो ! ऋण तिर्न फेरी कतार जादै सुबेदी
विदेशबाट आउदै गरेका बुबालाई लिन काठमाडौ पुगेकी बिनिता यो के भयो एक्का’सी (भिडियो हेर्नुस्)
होटलमा तिन दिन सम्म एउटै कोठामा २ केटि १ केटा संगै सुते संगै खाए तर एक्कासि के भयो?
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/प्रियंका कार्की
1692minutes read
महानायक’ प्रकरणमा प्रियंका कार्कीले यस्तो अभिब्यक्ति दिएपछि …काठमाडौं । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अहिले विभिन्न विवादले चर्चा पाएको छ । कलाकारहरु एक पछि अर्को विवादित बन्दै गएका छन् । लकडाउनको समयमा घरमै फुर्सदिलो समय विताएका कलाकार सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीका कारण विवादित हुने गरेका छन् ।
नायीका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र नायक तथा फिल्म निर्मााता भुवन केसीबीचको विवाद साम्य हुन नपाउँदै फेरी अर्को विवाद सुरु भएको छ । त्यो विवाद नायक राजेश हमाललाई दिएको महानायक सम्मानका विषयमा हो । एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा हाँस्य कलाकार तथा फिल्म निर्माता दिपाश्री निरौलाले राजेश हमाललाई महानायक पदको विषयमा प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
उनले अहिले पनि राजेश दाई हुनुहुन्छ र ? भन्दै उनको महानायक पदवी माथी प्रश्न उठाएकी थिइन् । अन्तरवार्ताका क्रममा उनले बोलेको सोही कुरा पछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा दिपाका बारोम निकै नराम्रा कमेन्ट आइरहेका छन् । उनलाई ब्यक्तिगत रुपमा गाली समेत गरिएको छ । जसका कारण दिपाश्री त’नावमा रहेको बताइएको छ ।
टेलिभिजन अन्तर्वाताका क्रममा अभिनेता राजेश हमाललाई ‘महानायक हो र ?’ भनेपछि व्यापक आलोचना खेपिरहेकी कलाकार दीपाश्री निरौलाका पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेका हुन् । यसै क्रममा नायिका प्रियंका कार्कीले पनि आफ्नो मत प्रकट गरेकी छन्। नायिका कार्कीले फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै एउटा गलत बोली वा तर्कले कोही व्यक्तिको चरित्रमै दाग लगाइदिनु राम्रो नभएको बताएकी हुन्।
उनले लेखेकी छन्, चलिरहेको आदरणीय दिपा दिदीको बिवादले हामी सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ। यसै सन्दर्भमा दुई शब्द राख्ने अनुमती माग्दछु।
कसैको तर्क, भाव या बिचार आफुलाइ चित्त नबुझे आवाज उठाउने अधिकार तपाइ सबैमा सुरक्षित छ। चित्त नबुझेको कुरा राख्नुस, वहाँलाइ सकारात्मक ढंगले सच्चाउनुस।
वहाँ लगायत हामी सबै तपाईंहरबाट सिक्न चाहन्छौ। तपाईंहरुले माया गर्नुहुन्छ, हामीलाइ हौसला दिनु हुन्छ, हाम्रो खुसीमा सहभागीता देखाउनु हुन्छ र त्येसै गरि, हामीबाट केही गलती भएमा हामीलाइ सच्च्याउने र सकारात्मक ढंगले सही मार्ग देखाउने अधिकार पनि यहाँहरुलाइ छ। र त्यसको सम्मान पनि हामी गर्छौ। तर सच्चाउने क्रममा अ’स्लिल गा’ली, गलौच र चरित्र ह’त्या कृपया नगरिदिनुस। एउटा गलत बोली या तर्कले कोही ब्यक्तीको च’रित्रमै दाग लगाइदिनु त राम्रो होइन नि।
हाम्रो आफन्त, आफ्नै छोरा-छोरीले केही गलती गरे, हामी के मुख छाडेर, मन परि अ’श्लील गाली गर्छौ र ? गर्दैन्नौ नि। एउटा अभिभावकको नजरबाट सम्झाउछौ, गलती औल्याउँदै अगाडी बड्ने हौसला दिन्छौ, माफी मागे स्वीकारछौ। यहि तरिका हाम्रा देशका छोरी चेलीको लागि पनि अपनाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो नि। होइन र ? आखिरमा हामी सबै मानिस हौ। हाम्रो मानसिक स्वास्थ पनि प्रभावित हुन्छ, होइन र ? यो बिषयमा ध्यान पुराइदिनुस, विनम्र अनुरोध। धेरै माया। प्रियंका कार्की
यी ४ राशिलाई
बृहस्पति,शनि र केतुमाथि राहुकाे दृष्टिले गर्दा पुनः कोरोना संक्रमण बढेको हो : ज्याेतिषी रिजाल
भोली रक्षा बन्धन तथा जनै पूर्णिमा : यस्तो छ जनैको महत्व
17 hours अघि
23 hours अघि
2 days अघि
सडक दुर्घटनामा तेजाको निधन, सुपरस्टार शव हेर्न पनि गएनन्
Plz फोटो छोएर Rip लेखीदिनु होला सिद्धार्थको आत्माले शान्ति पाओस्
3 weeks अघि
आमा र छोराको लाश एकैपटक मृत्यु दया हुनेले मात्र Rip लेख्नुहोस
4 weeks अघि
थपियो बज्रपात: विमान दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, मनमा माया भए #RIP लेखौ
स्वेता खड्काले कसिन् लगनगाँठो बधाई दिनेको ओइरो….